Arsenal ayaa guul muhiim ah gurigeeda kaga gaadhay kooxda Everton oo marti ugu ahayd, Waxayna Gunners guushan ku gaadhay 2:0, waxaana goolasha u kala dhaliyay Olivier Giroud iyo Tomas Rosicky. Guushan ayaa Arsenal ka caaawisay inay ku soo laabato kaalinta saddexaad ee kala saraynta horyaalka Ingiriiska, waxayna booska ka riixatay Man United oo si ku meel gaadh ah ugu sii jirtay kadib guushii ay Sunderland ka gaadhay.
Kooxda Arsenal ayaa Emirates Stadium ku soo dhawaysay kooxda Roberto Martinez ee Everton, Waxayna Gunners doonaysay inay kooxda Everton guulka gaadho si ay iskugu ilawsiisy murugadii iyo ciilkii ka soo gaadhay kulankii isla Emarites Satadium ee ay kooxda Monaco guusha wayn kaga gaadhay kulankii lugta hore ee Champions Leaque-ga.
Arsenal ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo maanka ku haysa guulaha ay gaadheen kooxaha Man United iyo Liverpool oo ay kula dagaalamayso kaalmaha Champions Leaque-ga loogu soo baxo ee 3 aad iyo 4aad. Arsenal ayaa kulankan Everton soo dhawaysay iyada oo ay isku dhibco yihiin Liverpool oo Man City guul muhiim ah ka gaadhay halka Man United ay kaalinta saddexaad sii biixisay kadib guul ay ka gaadhay Sunderland. Sidaa daraadeed Wenger iyo kooxdiisa ayay doorashadu ku yarayd.
Kadib markii uu qalaadaad aan loo dul qaadan karin sameeyay Mertesacker ayuu Wenger difaaca ree Jarmal kuridga kaydka dhigay, wuxuuna difaaciisa dhexe ku wada bilaabay Gabriel iyo Koscielny, wuxuuna sidoo kale Wenger kursiga kaydka fadhiisiyay Danny Welbeck.
Inkasta oo ay Everton fursado fiican heshay gaar ahaan Lukaku ayay hadda ka faa’iidaysan wayday iyada oo uu David ospina kooxdiisa ka badbaadiyay fursad halis ahayd.Dhinaca kale Gabriel ayaa shaqo fiican ka qabtay Lukaku oo halista ugu badan ku ahaa Arsenal.
Daqiiqadii 39 aad ayay Arsenal heshay fursada ay hogaanka ciyaarta kula wareegtay kadib markii uu Olivier Giroud kooxdiisa udhaliyay goolka furitaanka, waxayna ciyaartu isku badashay 1:0 ay Arsenal hogaanka kula wareegtay. Kubbad uu ka helay Ozil ayuu Giroud ku dhaliyay goolkan.
Goolka uu Giroud dhaliyay ayaa haa goolkiisii afraad ee uu Everton ka dhaliyay afartii kulan ee ugu danbaysay.Qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Gunners hogaanka ciyaarta ugu haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Everton bilawday inay iska soo celiso goolka ay Arsenal kaga hormartay qaybtii hore ee ciyaarta waxayna markiiba sameeyeen fursado fiican.Coleman iyo Lenon ayaa fursado fiican sameeyay.
Everton ayaa qaybta danbe ee ciyaarta muujisay qaab ciyaareed fiican halka Arsenal ay dadaal ugu jirtay inay ilaashato isla markaana ay difaacato goolka uu Giroud udhaliyay.Iyada oo Everton raadinaysa goolka barbaraha ayuu Tomas Rosicky kooxdiisa udhaliyay goolka saddexda dhibcood u xaasiliyay isla markaana Everton dhulka ku jiiday.
Tomas Rosicky oo ciyaarta badal ku soo galay daqiiqadii 82 aad ayaa markiiba ciyaarta saamayn ku yeeshay wuxuuna kooxdiisa gool aad u muhiim ah udhaliyay daqiiqadii 89 aad, waxaana markale goolka Rosicky caawiye ka ahaa Mesut Özil kaas oo goolka hore ee Arsenal ee uu Giroud dhaliyayna caawiye ka ahaa.
Dhamaadkii ciyaarta ayuu Bellerin ku sigtay inuu Arsenal goolka saddexaad udhaliyo, waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 2:0 ay Arsenal guul muhiim ah kaga gaadhay kooxda martida u ahayd ee Everton.Arsenal ayay guushani ka caawisay inay ku soo laabato kaalinta saddexaad ee kala saraynta horyaalka